Ngwaọrụ, Ngwaọrụ Microsoft nke anyị amachaghị ihe ọ bụla gbasara Akụkọ akụrụngwa
Echi Microsoft ga-eme ihe omume na New York City nke ọ ga-akpọsa ọtụtụ akwụkwọ akụkọ gbasara ngwaọrụ, n'etiti nke Mgbakọ niile na-apụta. Na mgbakwunye, anyị ga-amata ọtụtụ ozi gbasara Windows 10 na ụzọ iji soro sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke ndị nke Redmond.
Na awa gara aga anyị makwaara na lụlọ ọrụ nke Satya Nadella duziri ga-eweta ngwaọrụ, nke e mere baptizim na ofdị Dpị, na nke ugbu a anyị amaghị nkọwa ọ bụla.
Dị otú ahụ bụ enweghị ihe ọmụma anyị nwere banyere nke a ga-ekwe omume ngwaọrụ, na onye ọ bụla na-enwe obi abụọ ihe ọ bụ na mgbe ụfọdụ na-egosi na nwere ike ịbụ aha ọhụrụ nke Ekwentị Elu-anya-ogologo oge, ndị ọzọ na-ekwu na ọ nwere ike ịbụ smartwatch mbụ Microsoft.
Ekwuola ọtụtụ ihe banyere Ekwentị Mkpa n'oge ndị a, ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na anyị agaghị ahụ ya ruo izu mbụ nke afọ 2017. betzọ nzọ ahụ nke Mpepu Mpepu nwere ike ịbụ elekere anya mara mma na-eme ka enwekwu uche mgbe mwepụ nke Band 2 na karịsịa ịkagbu oru ngo nke Band 3 na-emepe.
Microsoft bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ole na ole na-abanyebeghị ahịa smartwatch, na ma eleghị anya, echi anyị ga-ahụ ngwaọrụ mbụ iji zoo asọmpi Apple Watch ma ọ bụ LG ma ọ bụ Samsung. Ihe dị mma banyere ihe a niile bụ na anyị ga-echere elekere ole na ole iji chọpụta ihe kpatara aha Mgbapụ Mkpa.
Kedu ihe ị chere ga-abụ Mkpo Mkpa nke Microsoft ga-ewepụta echi?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ngwaọrụ Mkpa, ngwaọrụ Microsoft ọhụrụ nke anyị amachaghị ihe ọ bụla